‘होस्टेल रिटर्न्स’ ले लाइभ प्रोमो देखायो, फिल्मप्रति उत्सुकता बढायो ! « Mazzako Online
‘होस्टेल रिटर्न्स’ ले लाइभ प्रोमो देखायो, फिल्मप्रति उत्सुकता बढायो !
सम्भवत : नेपालमै पहिलोपटक लाईभ प्रस्तुततीका साथ प्रतिक्षित फिल्म ‘होस्टेल रिटर्न्स’ को प्रोमो सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रवार दिउँसो राजधानीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा आयोजित क्यास्पियन भ्याली कलेजको वेलकम प्रोग्राममा फिल्मका मुख्य कलाकारहरु सुशिल श्रेष्ठ, शशी श्रेष्ठ, नाजिर हुसेन, सुधाम सिके, अभय बराल, स्वस्तिमा खड्का लगायतले लाईभ प्रस्तुती दिएर प्रोमो सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘सायद’ र ‘होस्टेल’ जस्ता व्यवासयिक रुपमा सफल फिल्म बनाएर अब्बल र सफल निर्माताका रुपमा चिनिएका सुनिल रावलको निर्माणमा बनेको ‘होस्टेल रिटन्र्स’ लाई सुरज भुषालले निर्देशन गरेका हुन् । दुर्गिस फिल्मस्को ब्यानरमा बनेको ‘होस्टेल रिटर्न्स’ सफल फिल्म ‘होस्टेल’ कै सिक्वेल हो । फिल्म वैशाख २५ देखि सार्वजनिक प्रदशर्नमा आउँदैछ ।